Music « Filmy Nepal
-अनुकूल अर्याल रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत संगीत बिषयका विद्यार्थीले ‘धून’ बोलको (लिरिकल भिडियो) सहितको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उज्जल सागरको आफ्नै युटुव च्यानलबाट सार्वजनिक उक्त गीतमा
धर्मेन्द्र सेवानले ल्याए ‘गुलाबको फूल’ (भिडियो)
गायक धर्मेन्द्र सेवानको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार आफ्नै युट्युब च्यानलबाट उनले ‘गुलाबको फूल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक उक्त गीतमा शब्द तथा संगीत पनि धर्मेन्द्र
दिपेन्द्रको रङ्गमा प्रेम पोख्दै नीता र निराजन (भिडियो)
अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र मोडल अभिनेता निराजन प्रधान स्टारर गीति भिडियो ‘रङ्ग भित्रको उजाड जीन्दगी’ रिलिज भएको छ । भिडियोमा एक रानीले प्रेम प्राप्तीको लागी राजाको लागी गर्ने त्याग तपस्याको
रोजनको ‘के यो माया हो’मा हिन्दी गीतमा मोडलिङ गरेकी रोजी (भिडियो)
‘के यो माया हो’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। आईतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। रोमन बज्राचार्यको शब्द रचना तथा संगीत रहेको गीतमा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै
‘पी आर’मा विदेश जाँदै दुर्गेश र सोनिका !
गायिका अनिता चलाउने र गायक बसन्त थापाको स्वरमा गीति भिडियो ‘विदेशको पी आर छ’ रिलिज भएको छ । गीतले ‘पी आर’ को नाममा विदेशिने युवा युवतीको कथा बोलेको छ ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रियंकाले निर्देशन गरेको यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो । बाल गायिका आयुष्का खनियाँको ‘मेरै लाहुरे’ले बोलको गीतको म्युजिक भिडियोबाट
डिभोर्सपछि मिलनले सार्वजनिक गरिन् ‘सिन्दुर’ !
नेपाली सुगम संगीतकी चर्चित गायिका मिलन नेवार (अमात्य) को स्वरमा ‘सिन्दुर’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सञ्चारकर्मी मधु शाहीको शब्द रहेको गीतमा चित्रकार, गायक एवम् संगीतकार ज्योति प्रकाशले संगीत
पुर्वमा संगीत महोत्सव, इटहरी झुमाउन नबिन र एड्रियन प्रधान तयार
पूर्वका पर्यटकीय स्थानको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ । हाम्रो कार्टले भिजिट नेपाल ट्वान्टी ट्वान्टीको समेत प्रवद्र्धन गर्ने गरी कन्सर्टको आयोजना गर्न लागेको हो । आयोजक
कविता र नमराजको प्रेममा कुमार आचार्य भिलेन ! (भिडियो)
लेखबहादुर आचार्य उर्फ (कुमार)को निर्देशनमा तयार म्युजिक भिडियो ‘कुनै दिन मायामा’ सार्वजनिक भएको छ । प्रेमिल भाव बोल्ने गीतका शब्दहरुले प्रेम र रोमान्स बोल्छन् । प्रमोद खरेलको स्वर समावेश गीतमा
भारतिय चर्चित र्‍यापर वन्ताई काठमाडौंमा
भारतिय चर्चित र्‍यापर इमिवे बन्ताईले काठमाडौं तताउने भएका छन् । अल्फा इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा हुने ‘इमिवे बन्ताई लाइभ इन नेपाल’मा शुक्रबार उनले आफ्नो र्‍याप सुनाउने छन् । ठमेल स्थित